people Nepal » मौन अवधिमा के गर्छन् दलहरू ? : के गर्न पाउँदैनन् ? मौन अवधिमा के गर्छन् दलहरू ? : के गर्न पाउँदैनन् ? – people Nepal
मौन अवधिमा दल र उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गर्न निषेध
२९ बैशाख, काठमाडौँ – स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि बिहीबार राति १२ बजेदेखि ४८ घन्टे मौन अवधि सुरु भएको छ । मौन अवधिमा दल र उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गर्न निषेध गरिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाले मौन अवधिमा प्रचारप्रसारसहित ६ किसिमका रोक लगाएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
-विभागका अनुसार शुक्रबार काठमाडांै उपत्यकासहित देशभरको मौसममा आंशिक बदली हुनेछ । मध्य र पूर्वी नेपालमा भने मेघगर्जनसहित वर्षा पनि हुनेछ । ३१ वैशाखसम्म छिटफुट रूपमा वर्षा भइरहने मौसमविद् श्रेष्ठले बताए । सबैभन्दा धेरै वर्षा दिपायलमा २२ मिलिमिटर, ताप्लेजुङमा १५ मिलिमिटर र डडेल्धुरामा ५ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा सुदूरपश्चिमी क्षेत्रमा कम वर्षा हुने देखिएको छ ।